Zuva nezuva kuverenga bhaibheri kuronga kwaNovember 8th 2018 | MINYENGETERO MARI
musha Urongwa hwekuverenga Bhaibheri Zuva nezuva kuverenga bhaibheri kuronga kwaNovember 8th 2018
Kuverenga kwedu bhaibheri zuva nezuva kwanhasi kunobva mubhuku raEsteri 1: 1-22. Verenga uve wakaropafadzwa.
Esiteri 1: 1-22:
1 Zvino zvakaitika mumazuva aAhashivheroshi (uyu Ahashivheroshi wakabata ushe, kubva paIndia kusvikira Etiopia, kupfuura mamwe makore zana nemakumi maviri nemaviri) 2 kuti pamazuva iwayo, mambo Ahashivheroshi paakange achigara pachigaro cheushe ushe hwake, hwaiva muShushani panhare, 3 Mugore rechitatu rokubata kwake ushe, akaitira machinda ake ose navaranda vake mutambo Simba rePezhiya neMedhia, ivo machinda navarindi, ivo vamativi enyika, vakamutangira. 4 Paakaratidza hupfumi hwoushe hwake hwakanaka nekukudzwa kwekukudzwa kwake kukuru mazuva mazhinji, iwo mazuva zana nemakumi masere. 5 Zvino mazuva iwayo akati apera, mambo akaitira vanhu vese vaivapo paShushani panhare yamambo, vakuru navadiki, mazuva manomwe paruvanze rwebindu ramambo. 6 Pakange pane zvichena, zvakasvibirira, neblue, zviketani, zvakamoniwa, netambo dzerineni yakapfava uye nepepuru kumatare ezvigadziko uye mbiru dzemarble: mibhedha yakanga iri yegoridhe nesirivheri, pane paguva red, nebhuruu, uye chena, nedema. , marble. 7 Vakavamwisa mumidziyo yegoridhe, (iwo midziyo yaisiyanana neimwe,) newaini yamambo yakawanda, zvichienderana nenyika yamambo. 8 Uye iyo yekumwa yaive zvinoenderana nemutemo; Hakuna munhu akagombedzera, nekuti saizvozvo mambo akaraira vatariri vese veimba yake, kuti vaite sezvaida mumwe nomumwe. 9 Navahosi Vhashiti vakaitirawo vakadzi mutambo mumba yamambo, yamambo Ahashivheroshi. 10 Nezuva rechinomwe, moyo wamambo pavakafara newaini, akaraira Mehumani, naBiztha, naHarona, naBhigata, naAbagtha, naZetari, naKarike, ivo vabati vanomwe vaibata pamberi pamambo Ahashivheroshi. Uyai naVhashiti vahosi pamberi pamambo, vane korona youshe, kuti aratidze vanhu uye namachinda runako rwake. 12 Asi vahosi Vhashiti akaramba kuuya sezvairairwa namambo navaranda vake, saka mambo akatsamwa kwazvo, shungu dzake dzakapfuta mukati make. 13 Ipapo mambo akati kuvarume vakangwara, vaiziva nguva, (ndizvo zvaifanira kuita kwamambo kune vese vaiziva mutemo nekutonga. 14 Kuteerana naye kwakange kuri Carshena, naShetari, Adhimata, Tarishishi, Meresena, Marsena, Memucan, iwo machinda manomwe ePezhiya neMedhia, akaona chiso chamambo, uye iye akatanga kugara paumambo.) 15 Tingaitei kuna mambokadzi Vhashiti maererano nemutemo, nekuti haana kuita zvaakaraira mambo Ahashivheroshi navaridzi veimba? Ipapo Memucani akapindura pamberi pamambo namachinda, akati, "Vahosi havana kutadzira mambo chete, asi namachinda ose, nokuvanhu vese vari kumatunhu ose amambo Ahashivheroshi. 17 Nekuti ichi chiito chamambokadzi chichaenda kune vakadzi vese, uye vachazvidza varume vavo mumeso avo, kana zvichinzi, "Mambo Ahashivheroshi akaraira vahosi Vhashiti kuti riunzwe pamberi pake, asi haana kuuya. 18 Saizvozvo vakadzi vePezhia neMedhia vachati nhasi kumachinda ose amambo, vakanzwa nezve chiitwa chamambokadzi. Saizvozvo kusimuka kwakanyanya kutsamwa nehasha. Kana mambo achifara nazvo, ngavatore hake chirevo kubva kwaari, inyorwe pamirau yavaPeresia, navaMedhia, kuti irege kushandurwa, Kuti Vhashiti arege kuzouyazve pamberi pamambo Ahashivheroshi; uye mambo ngaape munda wake kumumwe wakanaka kupfuura iye. 20 Zvino kana chirevo chamambo chaachaita chikaparidzwa muushe hwake hwese, (nekuti chinhu chikuru), vakadzi vese vachakudza varume vavo, vese vakuru nevadiki.
Previous nyaya7 Zuva Kutsanya uye Munamato wekuvhura Mikova dzakavharwa
inoteveraZuva nezuva kuverenga bhaibheri kuronga kwaNovember 9th 2018
31 minamato mapoinzi ekudzivirira kubva kuvavengi
Pfungwa dzeminamato yenyasha neTsitsi
Sei Kunamata muMweya